साताको शेयर बजार : करीब ६८ अर्बको कारोबार, कुल बजारपूँजीकरण ४० खर्ब नजिक
जेठ २२, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो साता शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । बजारका विषयमा उल्लेखित धेरै कार्यक्रम नभएपनि वितरणमुखी बजेटलाई लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको साताको कारोबारले प्रष्ट पारेको हो ।
हुनत यस वर्षको बजेटले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ । यस वर्षको बजेटले व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको रुपमा छुट्टाछुट्टै पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरी वर्गिकरण गरेको हो ।
यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका लगानीकर्ताहरुले अब एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र कारोबार गरेमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सो अवधिभन्दा बढीमा कारोबार गरेमा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको हो । अल्कालिक लगानीकर्ताका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु लाभकर यो वर्ष सरकारले बढाएको हो ।
लाभकर वृद्धिको विषयलाई पनि लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक रुपमै हेरेको पाइयो । पछिल्लो समय निरन्तर गति लिएको बजारबाट फाइदा कमाइरहेका लगानीकर्ताहरुले दीर्घकालिन लगानीलाई जोड दिने खालको लाभकरको व्यवस्थाले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत लाभकर नै कायम गरी दीर्घकालिन लगानीको लाभकरमा छूटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।
जेठ १५ गतेको बजेट बक्तव्य पश्चातको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा हालसम्मकै उच्च रकमको कारोबार भएको थियो । यो साता नेप्से परिसूचकले उच्च विन्दु कायम गर्दा कारोबार रकमको उच्चता भने साताको पहिलो दिन रहेको थियो । उक्त दिन रू. १७ अर्ब २ करोड ८४ लाख ३२ हजार बराबरको ४ करोड २६ लाख ३६ हजार ३४८ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत साताको भन्दा यो साता कारोबार रकम रू. १७ अर्ब २ करोड २० लाख ३४ हजार बढी भएको छ । गत साता चार कारोबार दिनमा रू. ५० अर्ब ७७ करोड २५ लाख ७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा यो साता रू. ६७ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ४१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
शेयर कारोबार कित्ता पनि यो साता बढेको छ । गत साता ११ करोड ७५ लाख ८३ हजार ४८१ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा यो साता १५ करोड ६ लाख १२ हजार ७३८ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । गत साताभन्दा यो साता ३ करोड ३० लाख २९ हजार २५७ कित्ता बढी शेयर कारोबार भएको हो ।
साताको पहिलो दिन १२ दशमलव ५४ अंकले बढेको बजार दोस्रो दिन ४५ दशमलव २५ र तेस्रो दिन ११ दशमलव ६८ अंकले घटेको थियो । दुई दिनको निरन्तर करेक्सन पछि चौंथो दिन ५५ दशमलव ७६ अंक र पाँचौ दिन २९ दशमलव ६४ अंकले नेप्से परिसूचक बढेको हो ।
यो साता ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि गत साताभन्दा ९ दशमलव ४१ प्रतिशत माथी पुगेको छ । गत साता ५०३ दशमलव ७ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साता ५१३ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको हो ।
बजारले उच्च विन्दु कायम गर्दा कुल बजार पूँजीकरण रू. ३९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड २० लाख १५ हजार पुगेको हो । कुल बजार पूँजीकरण गत साताभन्दा यो साता रू. ५७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख ११ हजारले यो साता वृद्धि भएको हो ।
गत साता यो रकम रू. ३९ खर्ब ६ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४ हजार थियो । यो साता वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ११ दशमलव ९८ प्रतिशतलले वृद्धि भएको छ । गत साता १ हजार ७३४ दशमलव ७४ विन्दुमा रहेको वित्त समूहको परिसूचक यो साता १ हजार ९४२ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको हो ।
यो साताको वित्त समूहको परिसूचकले बैंकिङ समूहको परिसूचकलाई पनि पछि पारेको छ । बैंकिङ समूहको परिसूचक १ हजार ९०७ दशमलव ४६ विन्दुमा रहेको छ । गत साता १ हजार ८५७ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा रहेको बैंकिङ समूह यो साता ३० दशमलव ४७ अंक अर्थात १ दशमलव ६२ प्रतिशत बढेको हो ।
१ हजार १०० विन्दुदेखि बढेको बजार हालसम्म आइपुग्दा १ हजार ७५६ विन्दुभन्दा माथी पुगिसकेको छ । यो क्रममा थोरै पूँजी भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएपनि वाणिज्य बैंकहरुको शेयरमूल्यमा भने खासै वृद्धि भएको छैन । यसै सातादेखि बैंकिङ समूहको शेयरमूल्य पनि विस्तारै उकालो लाग्न थालेको देखिन्छ ।
यो साता गत साताभन्दा व्यापारिक समूहको परिसूचक ४ दशमलव ७६ प्रतिशत, जलविद्युतको ४ दशमलव ४७ प्रतिशत, निर्जीवनको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत, जीवनको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । यो साता व्यापारिक र जलविद्युत् समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका हुन् ।